Waxaa Jira Hal Magaal Oo Aan Ku Bixiyo: Wired | Martech Zone
Waxaa Jira Hal Magaal Oo Aan Bixiyo: Xiran
Isniin, Janaayo 26, 2009 Isniin, Janaayo 26, 2009 Douglas Karr
Saaxiibbaday way ogyihiin inaan ahay buug buugeed. Waan jeclahay buugaagta adag. Ma jiraan wax la mid ah dillaaca lafdhabarta bikradda ah iyo urka bogga qallalan oo leh khad cusub. Buug cusub ayaa dareemaya had iyo jeer inuu ii yahay hadiyad… aniguna waa taydii, waa taydii oo dhan!
Waxaan ka shaqeynayaa sinobbishness-gayga adag, in kastoo! Kama caawin karo laakiin waxaan dareemayaa dambi dhamaan buugaagta ku urursan gurigeyga oo u qalma inay aqriyaan kuwa kale oo aan diyaar u aheyn inay qufacaan qiimaha adag. Halkaas ayaan gaari doonaa, waan ballan qaadayaa Toddobaad ama wax ka yar gudahood, waxaan doonayaa inaan tartamo oo waxaan ku siinayaa sanduuq ka mid ah dahaarka adag ee aan la aqrin… weli ku jira caaggooda. Ku dhaji agagaarka!
Sikastaba… sida aan jeclahay dareenka warqadda, waxaan joojiyay aqrinta wargeysyada sanado kahor. Waan la hadlayey John Ketzenberger, weriye Ganacsi Star ah (ciqaab loogu talagalay) oo ku saabsan toddobaad ama wax ka hor. Waxaan joojiyay iibsashada joornaalka markii saxaafadu ay ka badashay sheyga una buuxisay inta udhaxeysa xayeysiinta.
Waxaan joojiyay iibsashada wargeysyada markii wargeysyada ay bilaabeen xayeysiinta inta tigidhada daabacaadda Axadda laheyd halkii ay ka ahaan laheyd inta sheekooyin war ee ay kashifaan Wali waa iga murugootaa. Haddii aysan ahaan lahayn tiirka John, ma hubo inaan weligay xitaa ka akhriyi lahaa Indianapolis Star khadka tooska ah, sidoo kale.
Weli waxaa jira hal daabacaad daabacan oo aanan sugi karin inaan furo oo aan furo, inkasta oo… waana taas Joornaalka Wayaash. Waxaan joojiyay iska diiwaangelinta sanado ka hor markii ay u wareegeen sawirada waaweyn, daabac yar… laakiin labadii sano ee ugu dambeysay waxay ahaayeen kuwo cajiib ah. Looma baahna wax qalafsan oo farshaxan - maqaal kasta waa bog-leex. Waxaa jira daabacaadyo aad uyar oo aanan u liqi karin dabool illaa dabool. Waxaan dib u aqriyay sanadkii la soo dhaafay xitaa waxaan ogaaday inaan wax ku qoro maqaallada Fiilooyinka hal mar 2 illaa 3 bilood.
Magazine-ka Bishan ee Bishan:
Gudaha Kacaankii GPS: 10 Codsi oo Ka dhiga Meelaha Ugu Badan
Madaxtooyada Xadgudubka ah: Obama Xaqiiqdii Ma Dib U Bilaabi Karaa Aqalka Cad?
Shirqoolka Lagu Dilayo Google
DIY DNA: Hal Aabe Oo Isku Dayay Inuu Jabsado Xeerka Hiddo-wadaha Gabadhiisa
Sayidka Mugdiga ah ee Broadband wuxuu isku dayayaa inuu hagaajiyo Sawirka Comcast
Maaddaama ay qormooyinkani hadda khadka tooska ah ku jiraan, runtii waxaan kugula tartami lahaa inaad akhriso qodobbadaas. Haddii maalintaadu ay ka buuxdo akhriska qoraalada mareegaha oo aad tahay mid ka mid ah dadka waaweeyn ee la yaaban sababta aan mar dambe ugu baahan nahay saxafiyiinta, mid ka mid ah qodobadan waa inay maskaxdaada beddelaan. Daryeelka iyo qoraalka la geliyay mid kasta oo ka mid ah qodobadan ayaa ka boodaya shaashadda bogga.
Markaan ka fekero inta aan ku bixiyo buug adag oo adag, iyo inta ay le'eg tahay kharashka joornaalka 'Wired Magazine' - waxaan la yaabanahay sababta aanan lacag badan uga bixin rukumadayda. Ma jiraan hal joornaal oo suuqa yaala oo dareenkeyga si weyn u soo tabinaya isla markaana si weyn uga warbixinaya waaxda tikniyoolajiyadda iyo waliba Wired.
Ma sugi karo ilaa Bisha soo socota ee Xadhigiisa!
Tags: caadooyinka iibsashadaistaraatijiyad isgaarsiineed
Suuq geynta Ujeedada, Ma ahan Kubadaha indhaha
Aniga lafteyda waan jeclahay Gawaarida laakiin mar labaad ayaan xiriir la yeeshay. Hada waan aqrinayaa.
Fiilooyinku waa midka kaliya ee aan ku dhegay sidoo kale. Anigu waxaan ahay ciyaartooy inkasta oo aan helay Macluumaadka Ciyaaraha labadii sano ee la soo dhaafay ama sidaas, laakiin taasi waa sababta oo ah waxay la timid kaarka qiimo dhimista ee Game Stop.
Akhristayaasha joogtada ah ee boggeena (www.inmedialog.com) waxay ogaan doonaan inaan nahay dad si xamaasad leh u taageersan heerka sare ee saxaafada noocay doontaba ha noqotee. Waxaan u damqanayaa kuwa ay tahay inay ku dhacdo wargeys maalinle ah oo ku soo baxa guri-labaad ama saddexaad; taasi runti waa kiiska halkan Ottawa, Canada, halkaas oo calalka maxalliga ah uu yahay kiis aan fiicnayn oo lahaanshaha warbaahinta shirkadaha salka ugu jira.
Nasiib ayaan ku yeelanay, hase yeeshe, in aan haysanno wargeys heer qaran ah oo maalinle ah, oo ah "Globe and Mail," oo ku soo dhaca albaabkayga irrida hore subax kasta. Waxay u ahayd hor-iyo-gadaal akhriskayga noloshayda muddo ka badan 25 sano oo la heli karay. Waxay ku jirtaa mid ka mid ah wargeysyada ugu wanaagsan ee ku hadla luuqadda Ingiriiska adduunka.
Akhriska 'Globe' maalin kasta waxay iiga tagtaa waqti igu filan oo kale oo xilliyeedyo ah sida balwaddaada dhabarka adag ee is-qirashada ah, Douglas, laakiin waxaan la wadaagayaa jacaylkaaga Xadgudubka Waxay noqotay joornaalkeyga koowaad ee teknolojiyadda tan iyo markii Ganacsiga 2.0 hoos maray. (Waxaad ka akhrisan kartaa diidmadayda 2.0 halkan: http://inmedialog.com/index.php/archives/a-business-20-titan-bows-out/) Waxay leedahay wax badan oo ka mid ah qalabka-iyo-geek iyo in yar oo ka mid ah ganacsiga ayaa ku garaacaya iyada oo ka badan 2.0, laakiin qoraalku waa mid aad u fiican, qaababka badanaa si fiican ayaa loo baaray oo looga fikiray waqtigana markaan ku dhammeeyo, mid kasta Arrinku wuxuu leeyahay dhowr bog oo geesaha ah oo dib u laaban si ay ii xasuusiso inaan u sii baaro wax kasta oo laga qoray boggaas.
Waxaan helnaa tiro joornaallo ah oo loo soo diro hay'addayada 'PR-tech-focus' toddobaad kasta; Wired waa midka kaliya ee shaqaalaha lagu amro waa in miiska la saaraa isla marka uu yimaado.
Jan 29, 2009 saacadu markay ahayd 12:24 PM
Waxaan la shaqeeyay The Globe and Mail qiyaastii 5 ama 6 sano ka hor waana ku raacsanahay qiimeyntaada. Globe, waqtigaas, aad ayey uga walaacneyd in la gaaro dhagaystayaasha saxda ah… Ma aha oo keliya inaad la xiriirto cidda iibsaneysa warqadda. Waxay ka fogaadeen qiimo dhimis sidoo kale - waxaas oo dhan waxay siiyeen wargayska qiime aad u badan oo la dareemay. Globe iyo Mail ayaa dhaafi kara Wall Street Journal oo ah wargeysyada ugu fiican adduunka. Waa warqad weyn iyo urur weyn!